Dzimwe CMS dzemablog. Vhura sosi sarudzo | Linux Vakapindwa muropa
Zvemukati mamaneja (CMS), sekutsanangura kwatakaita muchinyorwa chakapfuura , chengetedza huwandu hwakawanda hwekuvandudza nguva yewebhu uye nesimba. Vanobvumidza kutarisa kugadzirwa kwemhando yemukati uye kusaremekedza kutevedzera zviyero, webhu, kuenderana nemidziyo uye kukodzera kwemajini ekutsvaga.
Iwo munda umo iko kupihwa kweakavhurika sosi zvikumbiro kwakawandisa sezvazviri zvemhando yepamusoro.
1 Dzimwe CMS dzemablog. Mazano edu
Dzimwe CMS dzemablog. Mazano edu
Une mablog imwe yematanho ekutanga uye anonyanya kushanda panoshandiswa mamaneja ezvinyorwa. Hatisi kutaura izvozvo chikuva chakatarwa chinofanira kushandiswaMuchokwadi, iro rekutanga zita pane yedu runyorwa ndeye WordPress, iyo nekuda kwayo kwakawanda mashandiro ayo anozoonekwa kanoverengeka mune dzino dzakateedzana ezvinyorwa. Zvakare, Iwe haugone kushandisa chero mhando yemukati maneja uye kugadzirisa kodhi yetemplate pese paunoda kuisa chinyorwa. Zvaunofanira kuti dSarudza ndeyekuti iwe kana uchida kuchengetedza nguva kana kushandisa shoma pane webhu inomiririra. Iyo yakawanda mabasa iyo zvemukati maneja inogadzira, iyo yakawanda zviwanikwa zvainoda kubva kuseva.
A blog (ipfupi ye "weblog") iri online online magazini kana maonero uye webhusaiti ine ruzivo. Isu tinoshandisa izwi rekuti pepanhau nenzira yekuverenga nhoroondo, kwete zvekuburitswa kwenhau. Zvichida shanduro yakakodzera kwazvo ingave blog.
Iyo logbook yaive iyo vafambisi vechikepe vairekodha zviitiko zvechikepe zuva nezuva.
MuWebloglog, zvinyorwa zvinoratidzwa zvichiteerana zvichiteerana, pamwe nezvazvino zvinyorwa kutanga kutanga. Iyo chikuva uko munyori kana vanyori vakati wandei vanogovana maonero avo pane dzimwe nhaurwa.
Vamwe vanozivikanwa zvemaneja maneja ndeaya:
Icho chiri pamusoro iyo yakazara kwazvo yewebhu chikuva izvo zvinogona yaishandiswa kugadzira blog, webhusaiti webhusaiti kana sehwaro hwee-commerce portal. Dzinga akasiyana emahara uye akabhadharwa madingindira ekusiyana kwavo graphic uye plugin kutaridzika, zvakare yemahara uye yakabhadharwa, kuti iwedzere mashandiro ayo. Nezve iyo funtionability inoda sevha yewebhu uye injini yedhatabhesi.
Iri mune zvinyorwa zvekutanga zvekuparadzirwa kweLinux uye unogona kuhaya mhinduro dzekumisikidza dzinosanganisira pre-yakaiswa. Uye zvakare, tinogona kushandisa WordPress yemahara pa maseva avo.
Icho chiri pamucheto wakatarisana neWordPress.
Para kuchinja kutaridzika kwechinyorwa kunoshandisa iyo Markdown notation.
chipingo inoda kuiswa kweimwe yekuwedzera PHP module izvo zvinogona kunge zvisingawanikwe pane ese marongero ekushandira webhu.
Iyo ine inonzi Pro vhezheni iyo inosanganisira mamwe mapulagini akafanogadzirwa uye anogona kutorwa pasi nemari shoma yemupiro.
Kunyangwe iwe usingade database, kana iwe uchida rutsigiro rwePHP uye kumisikidzwa kwemamwe ma module, saka zvinogona kunge zvisingaenderane nezvose zvirongwa zvewebhu zvekubata.
Mumwe maneja wezvemukati ndizvo inotarisa kuve nyore uye haidi kushandiswa kwe database. Kunyange zvakadaro, zvinoramba zviripo PHP rutsigiro runodiwa. Kushandiswa kwayo kuri kungogumira kumunyori mumwe chete, kana paine zvinopfuura imwechete, vanofanirwa kugovana yavo yekushandisa uye password.
Zviri nyore kwazvo kurishandurira mune mimwe mitauro, asi iyo dudziro yeSpanish kusvika parizvino ine zvimwe zvikanganiso saka haigone kushandiswa.
Iko hakuna ruzivo rwakawanda nezve izvo zvinodiwa zvekumisikidza.
Ichi chemukati maneja yemablog uye emapeji ane yakanakisa yeavo asingade dhatabhesi. Iwe unongoda webhu inomiririra ine PHP rutsigiro. Inotsigira plugins kunyange iine matatu chete anowanikwa zviri pamutemo kurodha pasi. Iva tsigiro yevanyori vakawandisa uye sarudzo dzakasiyana siyana dzekumisa iyo yakajeka graphical. Dzinga chinyorwa chekutanga chinyorwa.
Iyo inogona kuiswa pane chero yewebhu inomiririra iyo inopa iyo Apache server uye PHP vhezheni 5 rutsigiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Dzimwe CMS dzemablog. Vhura sosi sosi
iRaspbian uye Raspbian X: "Windows" uye "masOS" yako Raspberry Pi yako